'Ukuzikhusela' kwakuyingxenye yamaKatolika kunye nento ebangela ukuguqulwa kwamaProthestani . Ngokwenene, ukunyanzelwa kwemali kunokuthengwa ukwenzela ukunciphisa isohlwayo obenetyala ngenxa yezono zakho. Yithengela ukungathandwa kwabathandekayo, kwaye baya ezulwini baze bangashisi esihogweni. Yithengela ukuzithoba, kwaye akufuneki ukuba uxhalabele malunga nento enzima. Ukuba oku kuzwakala ngathi ikheshi okanye izenzo ezilungileyo zintlungu engaphantsi, yile nto leyo.
Kubantu abaninzi abangcwele njengoMartin Luther, oku bekuchasene noYesu, ngokuchasene nembono yecawa, ngokubhekiselele kwinqanaba lokufuna intsilelo nokuhlengwa. Xa uLuther wenza into echasene nayo, iYurophu yayiye yaguqukela ekugqibeleni yayizahlukana kwi-revolution ye 'Ukuguqulwa'.
Icawa yobuKristu engama-ntshona ye-ntshona-i-Orthodox yaseMpuma yayiluhlukileyo kwaye ingagqitywanga yile nqaku - yayiqulethe ezimbini iingcamango eziphambili ezavumela ukuba izibambiso zenzeke. Okokuqala, wawuya kuhlwayelwa ngenxa yezono ozifumene ebomini, kwaye eso sihlwayo sasiqheliswa kuphela ngemisebenzi emihle (njengokhenketho, imithandazo okanye iminikelo ekuthandweni), ukuxolelwa nguThixo kunye nokungabikho. Okona ukonile, esikhulu isijeziso. Okwesibini, ngexesha eliphakathi, i-purgatory yaphuhliswa: umbuso wangena emva kokufa apho wawuya kuba neentlungu eziza kunciphisa izono zakho de ube ukhululekile, ngoko ke awuzange ulahlwe esihogweni kodwa unokusebenza.
Le nkqubo imenywe into ebenokubangela aboni ukuba banciphise izijeziso zabo ngokubuyisela into ethile, kwaye njengokuba i-purgatory yavela ukuze iibhishophu zinike amandla okunciphisa ukulahlwa. Oku kuqhutywe kwiinkcenkceshe, apho wakhuthazwa ukuba uhambe kwaye ulwe (ngokuqhelekileyo) ngaphandle kwelinye ilizwe ngokubuyisela izono zakho.
Yayisisitye esincedo kakhulu ekukhuthazeni ihlabathi apho ibandla, uThixo, kunye nesono ziphakathi.
Kule ndlela, inkqubo yokuzikhusela iphuhlisiwe. Yenza ngokwaneleyo ukuba ufumane ngokupheleleyo okanye u-'Penary 'induduzo evela kuPapa okanye kwiqela elincinci labasontweni, kwaye sonke isono sakho (kunye nesijeziso) sachithwa. Iingxowa-mali ezikhethekileyo ziza kugubungela inani elincinci, kwaye iinkqubo eziyinkimbinkimbi eziphuhlisiwe ezithi zikuxelele ukuba unjani isono ongakunxusa.
Kutheni Benza Okungekho
Le nkqubo yokunciphisa isono nesohlwayo sahamba, kwamehlo kwabaguquleli abaninzi beeNguqulelo, abaphosakeleyo. Abantu abangenayo, okanye abakwaziyo, baya kwi-crusade bayazibuza ukuba ngaba enye into ingabavumela ukuba bafumane ukunyaniseka. Mhlawumbi into ethile yemali? Ngako oko ukuzincama kwahlanganiswa nabantu 'abathengi', nokuba ngaba banikezela ngokunikela ngemali yesabelo kwimisebenzi yokunceda, kwizakhiwo zokudumisa icawa kunye nezinye iindlela ezazisetyenziselwa imali. Le nto yaqala ngekhulu le-13 kwaye yaphuhliswa, kwinqanaba apho urhulumente kunye necawa bekhenkcela ipesenti yemali, kunye nezikhalazo malunga nokuthengisa ukuxolelwa. Unokuzithenga iintlawulo zeenkohlo zakho, izalamane kunye nabahlobo abasele bafile.
Imali yayifake inqubo yokuzikhusela, kwaye xa uMartin Luther ebhala ama-95 akhe athile ngo-1517 wawahlasela.
Njengoko icawa yamhlasele kwakhona yavelisa imbono yakhe, kwaye ukunyanzeliswa kwakukho kwiindawo zakhe. Kutheni, wayezibuza, ingabe icawa idinga ukuqokelela imali xa uPapa, ngokwenene, ekhulula wonke umntu kwi-purgatory ngokwakhe? Icawa yahlula iziqhekeza, ezininzi zazo zalahla inkqubo yokuzikhukhumeza ngokupheleleyo, kwaye ngelixa zingakhange zicime i-underpinnings, iPapacy yasabela ngokunqabela ukuthengiswa kwee-indulgences ngowe-1567 (kodwa yayisemgangathweni.) Iimpazamo kudala kwiinkulungwane zengqumbo ebhotile kunye nokudideka ngokumelene necawa kwaye yavumela ukuba idibaniswe.
IiNewvelpe eziPhambili zeSharpe
Imfazwe YaseMelika: iMagosa Jikelele uGeorge G. Meade
Ukulimala Kwamaxesha Okuqhelekileyo Phakathi kweeklasi
I-Dos kunye neNtsholongwane yoTyelelo lwakho lokuQala kwiSitolo seCigar okanye kwiLounge
Izikhokelo zeeNkoleko zamaxabiso zamahhala ezi-10
Igrama yamasiko (yesikolo): Inkcazo kunye nemizekelo
Iingoma ezigqwesileyo ongeke uzizwe kwiRadio Rock Classic
I-Step-by-Step Discus Throw Technique